पूरक भोजनको नाममा ठगी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ६, २०७६ डा. अरुणा उप्रेती
अहिले नेपालमा ‘फोर्टिफिकेसन’को हावा चलेको छ । आमजनले खाने खाना पिठो, तेल, चामल आदिमा थरीथरीका भिटामिन, खनिज पदार्थ मिसाएर खान दिने चलन छ । जब सरकारले साधारणजनको स्वास्थ्यको वास्ता गर्नुको साटो ठूला व्यापारीहरूको पैसा कमाउने चाहनालाई बढी समर्थन गर्छ, त्यसबेला ‘फोर्टिफिकेसन’को ‘स्वाङ’ र नाटक हुन्छ ।
प्रकृति दयालु छ । राम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिने सम्पूर्ण भोजन प्रकृतिबाटै पाइन्छ । तर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र गरिबीको कारणले मानिसहरूलाई कुपोषण हुँदा व्यापारिक घरानाका मानिसहरू कुपोषण ठिक पार्न हामी खानामा अनेक थरीका भिटामिन मिलाइदिन्छौं । फोर्टिफिकेसन गरिदिन्छौं, अनि कुपोषण हुँदैन भनेर सरकारलाई भन्छन् । सरकार समस्याको विश्लेषणविनै त्यस्ता व्यपारीको चंगुलमा पर्छ । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुन्छ ।
नेपालमा अहिले पूरक खाना (पूरक आहार) भनेर अनेक प्याकेटका खाना, भिटामिन, खनिज, ओमेगा ३ जस्ता पदार्थको बिक्री भइरहेका छन् । एक चक्की वा क्याप्सुलको ५०–१०० रुपैयाँसम्म पर्ने यस्ता पूरक आहारले केही फाइदा हुँदैन । यो बनाएर बेच्ने कम्पनीहरूचाहिँं मालमाल हुन्छन् । उपभोक्ता मञ्चमा आबद्ध बाबुराम हुमागाईंले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कतिले विवेकशील तरिकाले पूरक आहार बेच्न नियम बनाउनुपर्छ भन्छन्, तर अनेक थरीका भिटामिन, खनिजहरू जुन प्रकारले क्याप्सुलका रूपमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्छन्, त्यो अविवेकशील नै हुन्छ । त्यो कामै लाग्दैन । अनि किन त्यसबारे नियम बनाउनु ?’
विवेकशील जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार पूरक आहारलाई औषधिको रूपमा खानै पर्दैन । सन्तुलित खाना खाए पुग्छ । पूरक आहार किन्नु व्यर्थमा पैसा खर्च गर्नु हो । डाक्टरहरू पनि ‘तिम्रो भोजन नै औषधि हो’ भन्छन् । वास्तवमा राम्रो भोजन नभए जति औषधि खाए पनि काम लाग्दैन ।
कुपोषित बालबालिकालाई भोजनको माध्यमबाट नै स्वस्थ बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा स्थापना गरेको ‘पोषण पुन:स्थापना गृह’मा कुपोषित बालबालिकालाई भान्छाकै खानेकुरा ख्वाएर, मसाज गरेर, खेलाएर, घाममा राखेर ठिक पारिन्छ । तर पूरक आहार बनाउने कम्पनीहरू भन्छन्, ‘सूक्ष्म पोषण तत्त्वहरू भएको पूरक आहारले अनेक रोगबाट बचाउँछ ।’ यस्तो भ्रम सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई नचाहिने औषधि किन्न लगाइन्छ ।
भारतमा सन् २०१७ मा ४ खर्ब डलरको ‘पूरक आहार’को व्यापार थियो । २०२२ मा यो १० खर्बको हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात् अनेक विज्ञापनको फन्दामा फँसेर मानिसहरू घरको खाना बेवास्ता गरी पूरक आहार किन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था देखा परिरहेको छ । मानिसहरूले ५ रुपैयाँमा पाइने खाना छाडेर पूरक आहारको रूपमा ५० रुपैयाँमा क्याप्सुल किन्छन् । आजभोलि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पूरक आहारलाई औषधि भनी लेखिदिन्छन् । कति दु:खलाग्दो कुरा ।
म १६ महिना नेदरल्यान्ड बसेँ । त्यहाँ कसैलाई पनि ‘भिटामिन’ वा ‘पूरक आहार’ दिएको देखिन्न । अमेरिकामा चाहिँ ‘हेल्थ फुड’ को नाममा पूरक आहारमा अर्बौं डलरको व्यापार हुन्छ । पूरक आहार नखाने डचहरू अमेरिकनहरूभन्दा स्वस्थ छन् भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
भारतमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार भिटामिनको चक्की, झोल र खनिज पदार्थ ४० प्रतिशत, अनेक थरीका ‘हर्वल औषधि’ भनेर २० प्रतिशत, फो बायोटिक १० प्रतिशत, ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिड, प्रोटिन १५ प्रतिशत विभिन्न नामबाट बिक्री हुन्छ । यो पढेपछि मलाई लाग्यो, त्यहाँका करोडौं जनतालाई ‘पूरक खाना’को रूपमा ठगिएको छ । त्यहाँका जनताले घरको गहुँ, दाल, दही छाडेर पूरक आहार खान्छन्, भोजन होइन ।
नेपालमा कुनै–कुनै स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई ३ वटा औषधि लेखे त्यसमा २ वटा पूरक आहार लेख्छन् । औषधि विभागले यस्ता पूरक आहार औषधि पसलमा बेच्ने होइन भन्छ । तर खाद्य विभागचाहिँ यसलाई बेच भन्छ । मारमा पर्ने त उपभोक्ता नै हुन् । यस्ता पूरक आहारको मानिसलाई जरुरतै पर्दैन । त्यसमाथि पनि क्लिनिकल अन्कोलोजी सम्बन्धी एक अध्ययनमा सिद्ध भएको छ— भिटामिन बी ६ र भिटामिन बी १२ चक्की पूरक आहारको रूपमा खाँदा फोक्सोको क्यान्सरको सम्भावना बढ्न सक्छ । यस्ता क्याप्सुलले बेफाइदा गर्छन् भन्ने उपभोक्तहरूलाई थाहा छैन । यस्ता पूरक आहारको बाहिरपट्टि लेखिएको हुन्छ, ‘औषधि होइन’, तर डाक्टरहरूले लेखिदिन्छन् । कसैले प्रश्न गर्दैन ।
काठमाडौंका ३ वटा अस्पतालमा ३ सय बिरामीको पुर्जीको विश्लेषण गर्दा डाक्टरले लेखिदिएको औषधि हेर्दा ५१ प्रतिशतलाई भिटामिन, १५ प्रतिशतलाई खनिज, ५ प्रतिशतलाई प्रोबायटिक, ३ प्रतिशतलाई प्रोटिन, ३ प्रतिशतलाई पाचन रस दिइएको फेला पर्‍यो । २३ प्रतिशतलार्ई चाहिँ किन केही पनि नदिइएको होला ? यो पनि अनुसन्धानको विषय हो ।
बालबालिकालाई घरको खानाले पुग्दैन । त्यसैले भिटामिन ‘ए’, ‘डी’ मिलाइएको पिठो ख्वाउनुपर्छ । महिलाहरू गर्भवती भएका बेला घरमा पकाएको खानाले मात्र कुपोषण हुनसक्छ । बच्चा सानो हुनसक्छ । त्यसैले फोर्टिफिकेसन गरेको अन्न ख्वाउनुपर्छ । व्यापारीहरू यस्ता भ्रामक प्रचार बारम्बार गर्छन् । तर गर्भवती महिलालाई पहिले नै शरीरमा भिटामिन ‘ए’ र ‘डी’ पर्याप्त छ भने भिटामिन ‘ए’ र ‘डी’ले ‘फोर्टिफिकेसन’ मिलाएको पिठो वा चामल खान दियो भने उसको शरीरमा यस्ता भिटामिन बढी हुनसक्छ । अनि झन् नोक्सान गर्छ । शरीरमा भिटामिन ‘ए’ चाहिनेभन्दा बढी भएपछि छालाका अनेक समस्या देखिन्छन् ।
आँखामा आँसुको कमी हुन्छ । कपाल झर्ने, नङ झर्ने, वाकवाक आउने, टाउको दुख्ने समस्या हुनसक्छ । ‘हाइपर भिटामिनोसिस’ अर्थात बढी भिटामिन भएपछि हड्डीमा पनि समस्या देखिन्छ । गर्भवतीलाई भिटामिन ‘ए’ बढी भएपछि भ्रूणलाई पनि असर पर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संघले भनेको छ, ‘अन्नमा भिटामिन ‘ए’ मिलाउनु हुँदैन ।’ भिटामिन ए त फर्सी, गाँजर, शखरखण्ड, हरियो तरकारी खाएपछि शरीरलाई प्राप्त भइहाल्छ । तर नेपाल सरकार फर्सी, सिस्नो, पालुंगो, सहजन, करीपत्ता, गाँजर आदि पर्याप्त हुने ठाउँमा पनि भिटामिन ‘ए’को क्याप्सुल नै खानुपर्छ भनिरहन्छ भने कुपोषणको समस्या कम हुँदैन ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:०८
कार्तिक ६, २०७६ कृष्णप्रसाद पौडेल
दुई वर्षअघि चुनावताका दलहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार घोषणा यी सबैमा नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने महत्त्वाकांक्षा बाँडिएको छ । आफ्ना सफलताका कथामात्र लेखिएका यी कुण्डलीमा नेपाली जनजीवनको मुख्य आधार कृषि सपार्ने ओँठेभक्ति त छ, तर कस्तो कृषि किन गर्ने भन्ने विचार र ठोस योजनाको प्रस्ताव भने कतै छैन ।
नेपालको खाद्य, भूमि र कृषिका सवाललाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका र रणनीतिक प्रस्ताव कुनै दलसँग नभए पनि कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने कुरा धेरैजसो दलका घोषणापत्रको साझा थेगो बनेको छ । यी सबैभन्दा अलि फरक वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भने १० वर्षभित्र मुलुकलाई अर्गानिक बनाउने प्रस्तावसमेत छ । यो प्रस्तावले कृषि बिग्रेकोमा चासो राख्दै सपार्न चिन्तन/मनन गर्न हामी सबैलाई हौस्याएको छ ।
गठबन्धनको यही घोषणालाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले त्यस प्रदेशलाई प्रांगारिक बनाउन आधारहरू तयार गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै यसले प्रांगारिक कृषि विधेयकसमेत संसदमा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारत सरकारले नेपालको कृषि सपार्न साझेदारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । यसको केही समयपछि कृषि प्राविधिक र अगुवा किसानलाई प्रांगारिक कृषि तालिमका लागि भारतको गाजियावादसमेत पठाइयो ।
साथै कृषि विकासको विद्यमान ढाँचालाई क्रमश: प्रांगारिक उन्मुख गराउन के कस्ता नीतिगत, संस्थागत र कानुनी ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने मूल जिम्मेवारीसहित सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धन उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइयो । यसले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भइसकेको छ ।
१० वर्षमा अर्गानिक मुलुक बनाउँछौं भनेर निर्वाचनका बेला वाचा गरेको वाम गठबन्धनले नै अहिले सरकार चलाउँदैछ । तर आफैले गरेको वाचा पूरा गर्न अर्गानिक कृषिको स्पष्ट खाका र दृष्टिकोण ल्याउनुपर्ने बेला यसको नेतृत्व भने रसायन र विषादी बेच्ने दलालका सामु लुटपुटिएर विषादीयुक्त कृषिको प्रबर्द्धन गर्ने जोडबलमै लागेको छ । सरकार र सरोकारवालाको विवेक नपुग्दा कृत्रिम रसायन र विषादीको बिगबिगी झन् बढेको छ ।
समग्र कृषि यात्राको नीतिगत तथा संस्थागत पहल गर्नुपर्ने नेतृत्व यसका लागि उत्साहितसमेत देखिँदैन । कृषि सपार्ने सरकारी जिम्मेवारी लिएको कृषि मन्त्रालय सिंहदरबारको प्रशासनिक पर्खालभित्र कैद छ । किसानका खेतबारीमा भेटिनुपर्ने कृषि प्राविधिक सेतो सर्ट र निलो कोटमा यही मन्त्रालयका कोठाचोटामा हल्लिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश हाजिर गर्ने र हाकिमको चाकडी र तारिफ गर्नमै व्यस्त छन् । यो बाहेक अरुले के काम गरेर दिन बिताउँछन्, केही थाहा छैन ।
अहिलेको कृषि प्रबर्द्धन पद्धति समग्रमा किसानमारा र उपभोक्ता विरोधी छ । मूलत: आसेपासे र बिचौलियालाई मात्र बाँडिने अनुदानमा टिकेको यो पद्धति टिके लोकतन्त्र जत्तिकै उत्ताउलो छ । यसको जरासम्म पुगेर समस्याको समयमै पहिचान र समाधानको पहल नगर्ने हो भने हाम्रो कृषिले पलायनको ओरालो बाटो फेर्न कठिन छ । कृत्रिम रसायन र विषादी घटाउन, खानेकुरा र खेतीपातीबारे जनचेतना फैलाउन, हरित क्रान्ति कृषिले हाम्रो कृषि प्रणाली तहस–नहस पारेको कुरा स्वीकार गर्न आँट गरौं । अगुवा किसानहरूको अनुभव सुनौं । तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर विश्लेषण गरौं । तत्काल र भविष्यका लागि लिने कृषिको बाटो कस्तो हो भन्ने बहसमा केन्द्रित भएर कुरा गरौं । यसले मात्र हामीलाई बिराएको बाटो फेर्ने र सच्चिने मौका दिनेछ ।
भूउपयोग र व्यवस्थापन हाम्रालागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । जोत्नेसँग जमिन छैन र जमिन हुनेले जोत्दैन भनेर बारम्बार कुरा उठिरहन्छ । यो विरोधाभाष नसल्टाई कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ तत्काल हाम्रो भूउपयोग कसरी गर्ने र भूमिमाथिको किसानको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा ध्यान दिऊँ । योसँगै झोलाका सहकारीलाई कृषि प्रबर्द्धनका लागि खेती, किसानी र खेतबारीसम्म पुग्नसक्ने कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौं ।
अहिले खेतीपाती गर्ने भन्नासाथ कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यापारीकरण गरी पैसा कमाउने भन्ने बुझिन्छ । आफ्ना बारीमा १० मुठा साग नहुनेले समेत बजार नभएको गुनासो पालेर बसेको छ । हामीले खाने खाना हाम्रो विवेक र बुद्धिले स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ, अन्यथा यो ढिलो या चाँडो रसायनबाट विषाक्त हुँदै जान्छ । यस्तो विषबाट खेतीपाती झन् कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने बुझौं । अहिले गाउँघरमा किसानहरू आफ्नै विवेकले रसायनमा आधारित कृषिको बाटो फेर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । सहरिया उपभोक्तासमेत सचेततापूर्वक रसायन र विषादीले आफ्नो जीवनमा परेको जोखिमबाट जोगिने प्रयत्न गर्दैछन् । यिनको उत्साह र आसमा विश्वास र भरोसा थपौं ।
सरकारले समृद्धिका लागि व्यावसायिक कृषि प्रबर्द्धनमा नै जोडबल लगाएको छ । यसैमा अनुदान बाँड्ने गरिएको छ र यही अनुदानमा भाडा असुल्ने कामसमेत जारी छ । यसरी अनुदानमा भाडा बुझाउने बिचौलियाले कृषिजस्तो सामाजिक मूल्यको उद्यम गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले किसानका नाममा ठगी बढाउँदै स्वाभिमानी किसानीको अपमान गरेको छ । परनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ । यसमाथि अझ विकासका नाममा लिएका दानका पैसाले सरकार र समुदाय दुवैलाई यस्तो दान दिनेहरूकै अगाडि निरीह र मुख ताक्ने बनाएको छ । यसबाट छुटकारा पाउने उपाय खोजौं ।
यस्तो उपायको बलियो उदाहरण पर्यापर्यटन प्रबर्द्धन हुनसक्छ । तर यसको पूर्वसर्त जैविक खाना र यसको संस्कृति हो । यसका लागि रसायन र विषादीमुक्त खानेकुरालाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरव बनाऊँ । साथै खानेकुरामा परनिर्भर नहुने वाचा गरौं, किनकि खानामा समेत अरुको भर पर्नुपर्ने मुलुक स्वाधीन र यसका नागरिक स्वाभिमानी हुन सक्दैनन् ।
खानेकुरालाई पोषणयुक्त र स्वस्थ्यकर बनाउनुको विकल्प छैन । यसतर्फको यात्रा पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्त आत्मसात र अभ्यास गरेर मात्र सम्भव छ । प्रांगारिक खेतीपातीबारे धेरै भ्रम फैलिएका छन् । यस्ता भ्रम चिर्न तथ्यबाट बोल्ने आँट गरेमात्र सम्भव हुन्छ । यस्तो आँट गर्न व्यापारिक कृषिका दलालको फेरो नसमाउने, र्‍याल नचुहाउने या तिनको दबाबसामु नझुक्ने अटल र स्वाभिमानी नेतृत्व चाहिन्छ ।
अहिले शिक्षालाई ठूलो र जान्ने हुने नाममा जीवनका वरिपरिभन्दा अरुको देखासिकी गर्न उक्साउने अभ्यास बनाएका छौं । यतिसम्म कि खेतीपातीको कुरा गर्दा नानीबाबुले किन यो रुखमा केरा फलाएको भनेर सोध्ने जिज्ञासु बनाएका छौं । जबसम्म उनीहरूलाई खाना र खेतीपातीको मर्म सानैदेखि बुझाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो कृषिले खुट्टाले टेक्ने छाँट छैन, किनकि हाम्रा भविष्यका किसान यिनै हुन् । तसर्थ हामीले हाम्रा नानीबाबुहरूलाई खेतीपाती गर्ने कुराको मर्म बुझाउने हो । यो कुरा आधारभूत शिक्षामा खेतीपाती जोडेर मात्र सम्भव छ । यसतर्फ उचित ध्यान दिन सकौं ।
कृषि कर्म पहिले खानको लागि हो । खान पुगेपछि मात्र अन्य घरायसी र सामाजिक, आर्थिक व्यवहार चलाउन बेच्ने र पैसा कमाउने हो भन्ने मनन गर्न र सोही अनुरुपको व्यवहार गर्न जरुरी छ । सबै कुरा पैसामा दाँज्ने र सबै कुरामा पैसामात्र देख्ने मनोरोग नहटेसम्म खानेकुराका लागि खेती गर्ने कुरा असम्भवप्राय: छ । समयमै यो समस्यालाई चिन्न र चिर्न सकेनौं भने निकट भविष्यमै भयंकर संकटको साक्षी हुनेछौं ।
खेतीपाती केवल उत्पादनको प्राविधिक विषयमात्र होइन, यो जीवन पद्धतिलाई समृद्ध बनाउने विचार या दृष्टिकोण हो । अहिले खेतीपातीबारे हाम्रो विचारमै गडबढी छ । अहिले कृषि विकास भनेर जे ज्ञान बढ्दैछ, यो विवेकहीन छ । यो ज्ञानले हामीलाई प्रांगारिक यात्रा तय गर्न दिँदैन । किसानलाई केन्द्रमा नराख्ने र किसानी गरी उनीहरूको जीवन पद्धति सुरक्षित गर्ने सोच र योजना विकास नगर्ने हो भने जैविक खेती गर्न सम्भव हुँदैन । कृषिले भुइँ छोडे यसैमा आश्रित हामी भुइँफुट्टा हुने हो भन्ने नबिर्सौं ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:०५